Mahdi Guuleed oo Guddoomiyaha Aqalka Sare ku tilmaamay hoggaamiye Mucaarad | Dhacdo
Home Wararka Maanta Mahdi Guuleed oo Guddoomiyaha Aqalka Sare ku tilmaamay hoggaamiye Mucaarad
Mahdi Guuleed oo Guddoomiyaha Aqalka Sare ku tilmaamay hoggaamiye Mucaarad
Xukuumadda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka hadashay khilaafka soo shaac baxay ee u dhaxeeya gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Villa Soomaaliya, kaa soo si weyn loo dareemay todobaadyadii ugu dambeeyay.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa sheegay in Guddoomiyaha Aqalka Sare uu yahay hoggaamiye mucaarad ku ah dowladda inteeda kale.
Mahdi Guuleed oo wareysi siiyay Horufadhi Media TV ayaa sheegay in Guddoomiyaha Aqalka Sare uu si isdaba-joog ah u soo saarayay qoraalo una muuqday mid mucaarad ah,isla markaana uu hoos u dhigay awoodii golaha Sharci dejinta.
“ Dhowrkii sano ee u dambeeysay sida aad Warbaahinta kala socoteen guddoomiye Cabdi Xaashi waxaa uu soo saarayay qoraalo isdab-joog ah,wuxuu u muuqdaa in uu yahay hoggaamiye mucaarad ah, wuxuu sidoo kale hoos u dhigay goihii Sharci dejinta oo muddo ma aysan kulmin oo qeylo-dhaantooda waad ogeyd, shirarkii loo baahnaa ma dhicin ayuu yiri” Mahdi Guuleed.
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo todobaadkaan gudihiisa waxaa uu soo saaray qoraalo uu uga soo horjeeday Gudiyada doorashada ee loo xilsaaray arrimaha doorashooyinka Xildhibaannada kasoo jeeda Gobolada Waqooyi, kuwaas oo uu ku tilmaamay in laga soo xulay Xafiisyada Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha & Ciidamada NISA.
Previous articleMadasha Xisbiyada Qaran oo ka hortimid Guddiyada Doorashooyinka
Next articleCabdi Jimcaale oo lagu dilay dalka South Africa